Brezila: Fampahafantarana ny Antoko Vaovao Tarihin’i Marina Silva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2013 3:06 GMT
Nampahafantarina tao an-drenivohitra Brasilia tamin'ny 16 febroary 2013, tamin'ny anarana hoe “Tambajotran'ny Faharetana” ny antoko politika vaovao najoron’ ny minisitry ny tontolo iainana teo aloha Marina Silva.
Olona teo amin'ny 1700 no nanatrika ny fampahafantarana izany Tambajotra izany, anisan'izany ireo mpanohana, mpanangana ny antoko ary ny mpirehan-kevitra, ary manantena ny hoheverina ho tahaka ny tena antoko politika tena izy ity Tambajotra ity – na dia kasaina tsy ho toy ny antoko politika mahazatra aza. Mifototra amin'ny fampiasana aterineto ho fitaovana lehibe hanaovana hetsika politika sy miompana amin'ny fahatezàny ny Tambajotra, ary manana tanjona ny hanangona sonia 500 000 alohan'ny septambra 2013, izay ilaina ho fankatòavana azy ho toy ny antoko.
Brasília – Loholona teo aloha nampahafantra ny antokony vaovao. Sary avy amin'i José Cruz/Agencia Brasil (CC BY 3.0)
Tao amin'ny aterineto no niforonan'ny antoko, taorian'ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nataon'i Marina Silva tao amin'ny tambajotra sosialy ny taona 201O. Tamin'izany fifidianana izany, vato teo amin'ny 20 tapitrisa teo no azony tamin'ny Antoko Maitso (Parti des Verts) (PV), izay nahazoany ny toerana fahatelo ary niteraka fiodinana faharoa izay tsy nampoizin'ny Antokon'ny mpiasa (Parti des Travailleurs) (PT), satria nihevitra ity Antokon'ny mpiasa ity fa handresy avy hatrany amin'ny fiodinana voalohany i Dilma Roussef
Miankina amin'ny fahaizamanaon'ity Tambajotra ity maneho ny maha-antoko politika vaovao azy alohan'ny volana oktobra 2013 ny firotsahan'i Marina Silva hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay hotontosaina amin'ny taona 2014, izay tsy miankina ihany amin'ny fanangonan-tsonia fa miankina amin'ny fanaparitahana ny satan'ny antoko [amin'ny teny portiogey, tahaka ity rohy manaraka ity] sy ny fankatoavan'ny fitsarana misahana ny fifidianana. Navoaka nandritra ny fampahafantarana ny Tambajotran'ny Faharetana ny Finiavana ara-Politika anaty 5 pejy, izay asa sy hevitra avy amin'ireo mpirehan-kevitra sy mpanangana ny antoko: Heloísa Helena, João Paulo Capobianco ary Walter Feldman.
Pikan-tsary tao amin'ny habaka BrasilEmRede.com.br
“Sady tsy ho an'ny maro an'isa no tsy ho an'ny mpanohitra”
Tao amin'ny aterineto, somary tsy dia nankasitraka ilay tambajotra ireo fanehoan-kevitra, nitsikera izy ireo fa “sady tsy maro an'isa, no tsy mpanohitra” ny antokon'i Marina Silva. Tahaka izany ity fanehoan-kevitra avy amin'i Carlos Afonso Quintela da Silva ity:
Andeha “hanjono” ny vaton'ny ny antoko hafa ny [Tambajotran'ny Faharetana]. Izany hoe ireo mpanohana tsy faly tamin'ny antoko nisy azy. Arak'izany, antoko hanangona fotsiny ireo mpanararaotra sy ireo izay tsy masina amin'ny antoko manokana misy azy ity antoko ity. Mitovy tanteraka amin'ireo antoko hafa rehetra.
Taorian'ny fandaharana Roda Viva tamin'ny 18 febroary, izay nohararaotin'i Marina Silva hanazavana teboka maromaro momba ny hetsika, indrindra momba ilay “sady tsy maro an'isa, no tsy tsy mpanohitra, ,nanjary somary nihamalefaka ny fanehoan-kevitra tao amin'ny aterineto.
Roberto de Santana Conceição naneho hevitra fa somary variana ho babo tamin'ilay resadresaka izy raha nanaraka izany tamin'ny fahitalavitra:
Arahabaina i Marina tamin'ny resadresaka, diso fanantenana amin'ny maha-Breziliana azy, amin'ny maha-olona azy, hinoy izao, fantatro ny herin'ny teny fampiasan'ireo mpitarika politika sy fivavahana, nahatsapa aho fa afaka miverina mifidy indray, mino aho fa tsy ho diso fanantenana.
Saingy aza adino fa monina aminà firenena hanjakan'ny kolikoly izay lasa fomba fanao isika ka mafy ny ady hatrehina.
Manana fijery mifanohitra amin'ny fijerin'ny antokokon'i Marina Silva, toy izao manaraka izao no fijerin'i Amaro Doce tao amin'ny Bilaogin'ny naman'ny Filoha Lula :
Tsy misy mandiso fanantenana kokoa mihoatra azy, ao amin'ny antokon'i Marina Silva ity, fandavana ny tolona politika ataon'ireo marefo sy fiondrehana manoloana ny fomba an-tany (konformisma) miankohoka eo anatrehan'ny matanjaka.
Nomarihany avy eo ny fanambaram-panohanana nataon'i Maria Alice Setúbal, mpandova sy mpiara miombon'antoka ao amin'ny banky Itaú Unibanco sy i Guilherme Leal (kandidà filoha-lefitr'i Marina tamin'ny taona 2010 sy tompony sady mpitantana ny orinasa Natura) amin'ny Tambajotran'ny Fahatezàna:
“Revirevy ariary zato am-pandrian'i” Itaú, sy Globo, ary ilay ratremabe neoliberaly tompon'ny Natura. Fahatezana mamaly bontana sy mpandala ny mahazatra. Ny miliaridera no mitarika, izy ireo no mpanoro-hevitra “hendry”, mpitari-dalana sy mpirehan-kevitry ny governemanta tsy azo antoka, izay ny TAMBAJOTRAn'i Marina no mampita ny hafatra amin'ireo Breziliana, ary mankatò ny baiko omen'izy ireo mpanorina azy. Manoa ny rehetra, tahaka ireo olo-pehezina amin'ilay horonantsarimihetsika Matrix. Mitovy amin'ny 502 taona voalohany diavin'ny tamin'ny tantaran'i Brezila.
Mifanaraka amin'izany fomba fisaina izany ihany, lasa miavaka ny fanehoan-kevitr'i Sonia Maria de Gouveia momba ny fialàna amin'ny tolona ara-politika sy ny firehan-kevitra sosialista:
Nisalasala ny amin'ny tsy fahombiazan'ny voasoratra i Homère, tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina hatrany ho antsika, ny olona ateraky ny voasoratra rehefa mandinika ny hevitr'ity loholona mpitory ny vaovao mahafaly teo aloha ity, etsy ankilany, manohana ny foto-kevitra sosialista ihany izy, ho fanohanana ny mahantra, etsy andaniny izy, te-hanintona ireo tanora sy ireo olona tsy manana firehan-kevitra mahazatra amin'izao vanim-potoana izao. Araka izany, ampiasainy ny tetikasany manokana hahazoana fahefana, ka tsy manome lanjany intsony ny fanabeazana sosialista niainany. Ny firodanan'ny sosialisma dia tsy mitondra afa-tsy fijaliana ho an'izao tontolo izao, ka mety ahitana ny fisongonan'ny petra-kevitry ny firoboroboan-karena manoloana ny fiahiana ara-tsosialy lalindalina kokoa.
Manoloana izany, Reinaldo Azevedo naneho hevitra tao amin'ny bilaoginy izay navoakan'ny gazetiboky Veja ihany koa:
Androany [l16 febroary 2013], nampivory ireo “mpanjono” i [Marina Silva] hampahafantatra ny fananganana antoko izay sady tsy ao anatin'ny mpanohitra no tsy ho an'ny maro an'isa, fa amin'ny “fijoroana”; izay sady tsy azo tanterahina no tsy revirevy, fa “fanaovana ariary zato am-pandriana”… Tao anatin'ny heriny indrindra izy, izany hoe tsy misy mahazo izay lazainy ny olona, fa mahita azy ho marani-tsaina ny olona.
Tamin ‘ireo kabary nambaran'i Marina nandritra ny fampahafantarana ny Tambajotra, ity manaraka ity no notsongain'ilay bilaogera:
Miaina krizin'ny sivilizasiona isika ankehitriny kanefa tsy ampy lahatahiry hiatrehana izany.
Avy eo, nitsikera ny “toetrany tia valim-bontana” ilay bilaogera:
Raha misy olona miteny fa “mandalo krizy isika kanefa tsy ampy lahatahiry handresena izany”, amin'ny fomba ankolaka no ilazany fa nisy ny lahatahiry tamin'ireo krizy taloha. Izay heverina ho “liam-pandrosoana” amin'ny kabariny dia “liam-pihemorana” rehefa tena jerena. Mahatsiaro ny lasa izay tsy nisy mihitsy izy.
Fisorantana anarana amin'ny Antokon'ny Tambajotra, Biraon'ny notêra ao Venâncio 2000, Brasília DF. Sary avy amin'ny Luiz Alves sur Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Etsy ankilany, fihetsika manohana ny fananganana ny antoko vaovao no nasehoan'i Paulinho, bilaogera, izay nilaza hoe:
Tsy tahaka ireo olona marobe izay mahita fa tafahoatra loatra ny isan'ireo antoko politika 30 eto Brezila, izaho kosa mihevitra fa tokony mbola hitombo avy telo heny izany, satria ahitana vahoaka maherin'ny 200 tapitrisa ny firenentsika ankehitriny, ary mpifidy avokoa ny 80 % amin'izany, tsy mino aho araka izany fa mahasolo-tena ny fomba fisainana rehetra ny antoko politika miisa 30.